Oke ire ọrịre 00 kapịpị/chara chara acha akwụkwọ nri nwere ihe HPMC
Ọnwụ na ihicha:
Ihe mgbanye ọkụ:
Uru ụlọ ọrụ:
1. Akụrụngwa sitere na ụlọ ọrụ nke anyị nwere njiri mara ihe na okike.
2.Healthful, Elu dị elu, ezigbo ọnụahịa & oge nnyefe
3.Halal & Kosher & Asambodo ISO & cGMP & BRC
4.GMO n'efu, Allergen n'efu, BSE/TSE n'efu
1.High kwekọrọ na ọnụego ndochi
3.HPMC sitere na plup osisi Europe ma ọ bụ America.
Enwere ike ị nweta capsule akwukwo nri nke HPMC site na ihe ndị na -eri nri eke. enwere ike ibipụta ya na ink obibi akwụkwọ eke iji chọpụta ngwaahịa gị n'ahịa. Na mgbakwunye, capsules akwụkwọ nri na-arụ ọrụ nke ọma na ụdị igwe ọ bụla dị elu na ọkara akpaka.
5.Natural na enweghị antiseptik, ụtọ na isi nwere ike kpuchie ya nke ọma.
Omenala ụlọ ọrụ:
Nchegbu na ahụike, mmepe mgbe niile na -abịa n'ihu
Zụlite site na teknụzụ na -aga n'ihu wee jiri ihe okike jee ije
Ịmụta na -adịgide adịgide ịkarị onwe ya
Nyere kpamkpam ngwaahịa na ọrụ
Ịrụsi ọrụ ike mgbe niile iji mebie maka ahụike ndị ahịa
Ntụkwasị obi ịdị mma:
Ọnụ ọgụgụ kwa igbe (iberibe)
NW n'otu igbe(KG)
Nkezi NW kwa igbe (KG)
Ejiri eriri akpa abụọ kpuchie ya na katọn
Nke gara aga: Ọnụ ego dị elu na -ere ọkụ mgbakwunye vegan mgbakwunye 0 akwụkwọ nri efu hpmc capsule
Osote: Nkwakọ ngwaahịa Eco-freindly ahaziri ahazi okpomoku akara mkpuchi aluminom foil efu iko kọfị nespresso capsule
Capsules efu maka Liquid
Ogwe Capsules efu 1
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri maka ndụ 250 capsules
Oke 4 Gelatin capsules
Ọnụ ọgụgụ dị elu na -ejupụta ihe efu anaghị eri anụ
Ọnụ ego dị elu na -ekpo ọkụ vegan Mmeju si ...
Akwụkwọ nri efu HPMC capsule shei
Oke nha njuputa dị elu 00 0 1 2 hpmc efu efu ...